I-Odisha Weekend Getaways | Indawo engcono kakhulu yokuhamba ngezimpelasonto
I-Odisha Weekend Getaways
Kuhlale kunzima ukwakha ukuhamba ikakhulukazi uma sisebenza i-9 ku-5 ezinsukwini zamasonto. Kodwa kuthiwani ngezimpelasonto? Kukhona amaviki e-52 onyakeni. Uzowasebenzisa kanjani? Abantu abaningi abahlukumezeka kakhulu ekuhambeni ukuhamba ngokuyisisekelo ngenxa yokuthi bacabanga ukuthi abanaso isikhathi esanele sokuhamba noma yikuphi ukunye indawo noma indawo yokuthenga noma amabhayisikobho. Kunoma ikuphi, lokho akuyona indlela engcono kakhulu yokuphila! Indlela elula kakhulu yokuqinisa izimpelasonto zakho ngokuhamba ngokuhamba ngebhayisikili eya e-Odisha Weekend ehamba ne-Sand Pebbles Tours.
Ukuhamba akusho ukuthi udinga ukuhamba ngenombolo enkulu yamamayela ukuze ufike lapho uya khona. Ngezinye izikhathi konke okudingayo yimpelasonto kanye nemoto ene-tank egcwele yamafutha.
Amaphakheji enhle kakhulu okuhambela izindawo ezithandwayo zezimpelasonto ezokuvakasha ziye zaba ukushaya okukhulu phakathi kwezivakashi zangaphandle nezokufuya. Iveliveli izama ukucabangela izithakazelo ezahlukene zokuphela kwesonto abavakashelayo zinike amandla amandla amaSandle amaSandane ukwenza isipelingi sentshiseko futhi inezelelo ezengeziwe ezikhiqizayo zenhlangano njengokwethembeka komthengi nokubonga. Ngakho-ke, amaphakheji ahlelwe ngokuhlolwa okujulile ahlanganisa iBhubaneswar, Puri, Konark, Chilika, Bhitarkanika nokuningi.
I-Odisha Weekend yokugada ihlelwe ngokukhethekile ngezokuvakasha ezingokomoya nezamagugu, ukuvakasha kwe-honeymoon, izinkambo ezikhangayo nomndeni nabangani kanye nokuvakasha kwe-eco kubantu abathandekayo bemvelo.
Indawo yokuhlala kuzo zonke izinkambo kanye namaphakheji kufaka ukudla kwasekuseni kuzo zonke izikhungo zokuvakasha. Izimoto zanamuhla zanamuhla izimoto zokunethezeka & abaqeqeshi kanye nabaqondisi abaqeqeshiwe nabaqeqeshwe baqondiswa amakhasimende. Amahhotela anamnandi anemikhiqizo yakamuva yokucabangela ingqondo ehlelwe ukusiza amakhasimende kuzo zonke izivakashi eziphezulu ezise-Odisha.
Iphakheji lokuvakasha elingokomoya Odisha
I-Bhubaneswar Amazing Trip